Importance of Accurate Financial Statements — Balance Professional Services
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းတွေ (Financial Statements) ရဲ့အရေးကြီးပုံက အထွေအထူးပြောပြနေဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ သူတို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရလဒ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ အခြေအနေကို တိတိကျကျဖော်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ Financial Statement တွေထဲမှာအဓိကအခြေခံ အစီရင်ခံစာ (၄)ခုရှိပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့
(၁) Income Statement (လုပ်ငန်းအရှုံး/အမြတ် စာရင်းအစီရင်ခံစာ)
Income Statement ကို နောက်တစ်မျိုး Profit & Loss Statement လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ သူကတော့ အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေနဲ့ အမြတ်တွေကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Balance Sheet (လုပ်ငန်းလက်ကျန် ရှင်းတမ်း)
Balance Sheet ဆိုတာက လုပ်ငန်းစတင်ချိန်ကနေပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေပေါ် မူတည်ပြီး ရေးဆွဲထားတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့လက်ရှိပေါက်စျေးတွေ၊ ပေးရန်ရှိစာရင်းတွေနဲ့ ရှယ်ယာစာရင်းတွေနဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Cash Flow Statement (လုပ်ငန်းငွေလည်ပတ်မှု အစီရင်ခံစာ)
Cash Flow Statement ဆိုတာကလုပ်ငန်းရဲ့ ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ Activities တွေဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ Activities တွေဆိုတာက လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့အချိန် ကုန်ကျငွေ၊ လုပ်ငန်းရဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ အစရှိတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Cash Flow Statement ဟာ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Income Statement နဲ့ Balance Sheet ကြားထဲက ပေါင်းကူးတံတားပါပဲ။ သူဟာ လုပ်ငန်းထဲကို ငွေ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုဝင်ပြီး ဘယ်လိုထွက်သွားတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့ အစီရင်ခံစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရင်းနှီးထည့်ဝင်လိုက်တဲ့ငွေတွေက လုပ်ငန်းရဲ့ဘယ်နေရာကိုဝင်သွားသလဲ? လုပ်ငန်းငန်းလည်ပတ်ငွေဆိုတာတွေကရောဘယ်ကနေလာပြီး ဘယ်ကိုသွားနေသလဲ? အကြွေးဘယ်လောက်ဆပ်လိုက်သလဲ? အမြတ်ဘယ်လောက်ခွဲပေးလိုက်သလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
(၄) Statement of Changes in Equity (အစုရှယ်ယာခွဲဝေမှုများ ပြောင်းလဲမှုအစီရင်ခံစာ)
Statement of Changes in Equity ဆိုတာက အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း လုပ်ငန်းရဲ့ ရှယ်ယာအပြောင်းအလဲများကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အစီရင်ခံစာတွေကို စီစစ်သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရဲ့တိုးတက်မှုတွေ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ချေများကို ကြိုတင်တွက်ဆခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလို တိကျတဲ့ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာတွေက ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကို ပြောပြပါ့မယ်။
Balance Sheet ပေါ်မှာ ဂဏန်းသေးသေးလေးတစ်လုံး လွဲသွားတာနဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ သိသိသာသာ ထိခိုက်မှု ရှိပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆိုတာကလည်း ပထမဆုံးစဝယ်တဲ့ အချိန်နဲ့ လက်ရှိအချိန်နဲ့ တန်ဖိုးတွေ မတူနိုင်တော့ပါဘူး။ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သူတို့ရဲ့ မူလတန်ဖိုးကနေ တန်ဖိုးလျော့ချပြီး တွက်ချက်သွားရပါမယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေကို သိတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်စာဝင်ငွေရဲ့ ဘယ်လောက်က တကယ်လက်ငင်းရတဲ့ငွေ (Actual Cash) နဲ့ ပမာဏ ဘယ်လောက် ရရန်ရှိငွေလည်းဆိုတာကို တိတိကျကျ သိရပါမယ်။ အခွန်မဆောင်ခင် အမြတ်၊ အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ်၊ အကြွေးအတိုးဆပ်ပြီးချိန် အမြတ်၊ တန်ဖိုးလျော့သွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ တန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်းနဲ့ ကျသင့်အခွန်ငွေ စတာတွေက လုပ်ငန်းရှင်တွေ သိကိုသိထားသင့်တဲ့ အရာတွေပါ။
အခုနောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲတင်းကြပ်လာတဲ့ ဥပဒေတွေ၊ အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အခွန်ဟာယခင်ကထက်ပိုပြီး အရေးပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မဆောင်မိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း မဆောင်တဲ့နှစ်အလိုက် နောင်ကြောင်းလိုက်လာတာတွေရှိနေပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ အခွန်ပေးဆောင်ရာမှာ တိတိကျကျ တွက်ချက်ထားမှသာ အခွန်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ ချောချောမွေ့မွေ့ ဖြစ်မှာပါ။
နစ်နာနိုင်တဲ့ အမှားမျိုးတွေ၊ ငွေအလွဲသုံးစားမှုတွေကို အချိန်မှီ သိနိုင် ဟန့်တားနိုင်ဖို့အတွက် တိကျတဲ့ Financial Statement တွေလိုပါတယ်။ ဥပမာ - ငွေကွဲပြား ခြားနားချက်များကို တိုက်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ငွေအလွဲသုံးမှုများကို မြင်နိုင်သိနိုင်ပါတယ်။
တိကျမှန်ကန်တဲ့ Financial Statement တွေလောက် ပိုယုံကြည်ရတာ မရှိပါဘူး။
ဥပမာ။ ။သင်ကသာ Investor (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ) တစ်ယောက်ဆိုပါက ကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေ ထည့်ဝင်မယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Financial Statement ကိုကြည့်မှာ အသေအချာပါပဲ။ အဲလိုကြည့်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ Balance Sheet (လက်ကျန်ရှင်းတမ်း) တွေမှာ အမြတ်တွေ အများကြီးပြထားတာတွေ ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချိန်မှာ ပြန်ပေါ်လာတာကတော့ သူတို့ကတကယ်တော့ ပေးစရာရှိတာတွေကို ထည့်မရေးဘဲ အမြတ်တွေများအောင် လုပ်ထားတာပါ။ အဲတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတစ်ယောက်အတွက်သာမက လုပ်ငန်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပါ တိကျမှန်ကန်တဲ့ Financial Statement (ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာ) ကလိုအပ်ပါတယ်။
ပေးရန်ရှိ ရရန်ရှိ ငွေများကို အကောင်းဆုံး အချိန်မှီပေးရန် တောင်းရန်အတွက် တိကျတဲ့ Financial Statement ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပေးရန်ရှိစာရင်းတွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းလစာတွေ၊ နေ့တွက်ခတွေ၊ ကုန်ကြွေးတွေ အစရှိသဖြင့် အကုန်ပါပါတယ်။ ဒီတော့ အချိန်မီပေးနိုင် တောင်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကပိုမို အဆင်ပြေလာပါတယ်။
ဒီတော့အချုပ်ပြောရရင် ဒီဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း/အစီရင်ခံစာတွေဟာ မိသားစုစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ရေရှည်အကျိုးများစွာဖြစ်ထွန်းနိုင်တာမို့ တိတိကျကျနဲ့ စနစ်တကျလုပ်ထားဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
စိတ်ဝင်တစား အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
AccountingHtet Khaing Hla Soe November 9, 2018 Accounting, Business Advice
Customer ServiceHtet Khaing Hla Soe November 10, 2018 Customer Service
AccountingHtet Khaing Hla Soe November 9, 2018 Accounting